H.E. U Myo Myint Than presents Credentials to King of Thailand – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
H.E. U Myo Myint Than presents Credentials to King of Thailand
U Myo Myint Than, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Thailand, presented his Credentials to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, King of Thailand on 27 November 2017, in Bangkok.
Dated. 1 December 2017
သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင်းမင်းမြတ်ထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းသည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဘန်ကောက်မြို့၌ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ် မဟာ ဗာဂျီရာလောင်ကွန်း ဗုဒင်ဒရာဒီဘာရာဗာရန်ကူးရ် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်